शुभेच्छाले लिफ्टबाट मोबाईल नंबर फालेपछि के भयो ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
शुभेच्छाले लिफ्टबाट मोबाईल नंबर फालेपछि के भयो ?
‘सपिङ्को बेला अचानक एक युवालाई देखेपछि शुभेच्छाको मन बहलाउन पुग्यो। ति युवा थिए निर्मल। आफ्नै कामले सपिङ् कम्प्लेक्स पुगेका थिए निर्मल। आँखा जुध्यो दुवैजनाको अनि बस्यो माया। शुभेच्छाले लिफ्ट चढेर माथी जान लाग्दा कागजको टुक्रामा आफ्नो मोबाईल नंबर लेखेर निर्मलको हातमा फालिदिईन्। केहि दिनमा नै उनिहरुको मायाले नयाँ मोड लियो।’
यो कथा राजन तिमिल्सिनाको नयाँ गीत ‘यो सम्बन्ध …’को भिडियोमा आधारित छ। राजनको स्वर तथा संगीतमा एल्बम ‘यो सम्बन्ध’ तयार भएको छ। यो एल्बमलाई एशियन म्यूजिकले तयार पारेको छ। यसअघि झण्डै डेढ बर्ष पहिले राजनले ‘कदम’ एल्बमबाट सांगीतिक पहिचान बनाएका थिए।
एल्बमको शिर्ष गीत ‘यो सम्बन्ध …’को भिडियोलाई बिभोर पोखरेलले निर्देशन गरेका छन्। निर्मल र शुभेच्छाको अभिनय रहेको सो भिडियोमा गायल राजनलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यो गीतमा रबि मल्लका शब्द रहेका छन्। टेकेन्द्र शाहले सम्पादन गरेको सो भिडियोलाई अंगुरेलले छायांकन गरेका हुन्।